Tsena Toy ny Reny Blogger | Martech Zone
Alarobia 12, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Chris Lucas
Ry bilaogera mamako
manana tato anaty vaovao tato ho ato noho ny fitiavany entana maimaim-poana sy ny tombontsoa azo avy amin'ny vehivavy tsara fanarahana.
Ny mahatonga ny bilaogera renin-tsika tadiavina toa ny pro PR sy ny mpivarotra dia ny ahafahan'izy ireo manetsika vondrona vehivavy marobe (ny ankamaroany), matoky izay lazainy, dia nanangana ny tenany ho mpanolotsaina azo itokisana ary mahalala izay tadiavin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo. Ka inona no ianaran'ny mpivarotra amin'ireo bilaogera reny?
Ny fianahan'ny bilaogera reniko dia tsy azo foronina ary ny fitiavanao ny orinasanao dia tsy tokony hosoka koa. Ny bilaogy mahomby indrindra dia ireo izay namboarina noho ny fitiavany zavatra ananan'ny mpanoratra, ny fianakaviany, ny asany sy ny fianakaviany, sns. Amin'ny maha mpivarotra azy dia mila mamaritra izay tadiavin'ny orinasanao ianao. 37 famantarana dia nanangana mpanaraka be dia be manodidina ny fitiavany rindrambaiko tsotra sy mahomby.
Campaign Monitor dia nanangana fitaovana marketing amin'ny mailaka tsara manodidina ny filan'ny mailaka voalamina tsara. Na inona na inona fanirianao, ataovy amin'ny marketing izany ary tadidio fa ny mpanjifanao dia afaka milaza ny filan'ny nofo avy amina zavatra vita!
Ny fifandraisana amin'ireo mpamaky azy no tena mahomby amin'ny fanaovana bilaogera. Fantatr'izy ireo izay bokotra atosika sy ny fomba hitondrana ny mpamaky azy hanao hetsika satria manana fatorana iraisana izy ireo. Azo antoka fa tsy ny mpivarotra rehetra no manana fatorana miavaka toy ny reny amin'ny mpanjifany, saingy afaka mahita karazana rohy iraisana izy ireo.
Amin'ny maha mpivarotra anao dia mila mahatakatra izay ilain'ny mpanjifanao ianao sy ny fomba ahafahanao mifandray amin'izy ireo. Na amin'ny alàlan'ny a fanadihadiana an-tserasera tsotra, na amin'ny alàlan'ny fitaovana an-tserasera hafa toy ny Social Media, ny fitadiavana fomba hifandraisana amin'ny mpanjifanao dia zava-dehibe amin'ny tontolon'ny marketing iray-to-iray ankehitriny.
Famoriam-bahoaka noho ny antony iray:
Betsaka ny bilaogera renim-pianakaviana no nivory noho ny antony. Na aretina io na Cookies skotisma zazavavy. Amin'ny maha orinasa anao dia azo jerena amin'ny zavatra inoanao ny fitiavanao. Na manana olana ara-piaraha-monina na antony mahatonga fitaovana tsotra sy mahomby kokoa ianao dia azonao atao ny manangona ny mpanjifanao sy ny mety ho mpanjifanao ary manao azy ireo ho mpiaro ny marika apetrakao amin'ny finoana iraisana.
Raha ny zava-misy, Salesforce dia nanjary fantatra haingana hoe No Software CRM ary mirehareha amin'ireo orinasa 59,000 ho mpampiasa ny vahaolana. Nivoaka izy ireo nanilika ny vahaolana CRM mifamatotra amin'ny lohamilina orinasa sy ny CRM demokratika amin'ny alàlan'ny famelana anao hiditra amin'ny tobim-baovaonao na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao.
bita nanamboatra marika rano manodidina ny antony iray - rano madio ho an'ny ankizy - ary nanampy azy hahatratra ny fizarana izany Starbucks. Rehefa mividy Ethos ianao dia mividy azy noho ny finoana fa tokony hanana rano madio ny ankizy. Mila mijoro amin'ny zavatra misongadina ny marikao, saingy tadidio raha mijoro amin'ny zava-drehetra tsy zakanao na inona na inona ianao… ka safidio tsara.
#BlogIndiana: Jason Falls, Blogger ary ireo andriamanitra Google